”Waan Google gareeyay Sampdoria, waan jeclahay inaan Juve gool ka dhaliyo” – Icardi – Gool FM
”Waan Google gareeyay Sampdoria, waan jeclahay inaan Juve gool ka dhaliyo” – Icardi
Raage November 8, 2017
(Milano) 08 Nof 2017 – Mauro Icardi ayaa daadiyay sirta ku jirta ka tegistiisii Barcelona oo uu usoo waydaartey kooxda Sampdoria, isagoo sheegay inuu jecel yahay inuu gool ka dhaliyo Juventus oo ah dhibanaha uu jecel yahay.
Wuxuu laacibkani kasoo tegey akadamiyaha da’yarta Barcelona si uu ugu biiro Sampdoria, waloow uu qirtay inaysan ahayn koox uu riyoon jirey.
“Waa run, inaan Google ka raadiyay Sampdoria, maaddaama aanan abid maqlin. Xitaa qaar ka mid ah asxaabtaydii Barcelona ayaa igu xifaalaynayay inaan la ciyaari doono Antonio Cassano iyo Giampaolo Pazzini,” ayuu Icardi u sheegay Inter TV isagoo sheegay inuu markiiba la qabsaday Samp isagoo abaal u haya Pedro Obiang.
“Waxaan jeclahay inaan gool ka dhaliyo Juventus, maaddaama uu xafiiltan kala dhexeeyo Inter. Waxaan goolal uga dhaliyay Samp iyo xitaa Nerazzurri.” ayuu raacshey.
“Ma doonayo inaan ku aado Spain wareega Group-yada Koobka Adduunka.”. Messi
''Milan waxay u baahan tahay 3-4 laacib oo waawayn, waxaan u xiisay San Siro oo ku daawanayso 80 kun'' - Marcel Desailly